July 17, 2019 Saed Balaleti
Habeen wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad joogtaan, sida aan inooga barateen waxaan maanta oo Arbaco ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta qaarada Yurub ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
PSG ayaa u bandhigtay Neymar kooxda Manchester United ka dib markii ay soo diideen dalabka Barcelona, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Spain. (Daily Express)
Arsenal ayaa heshiis ka gaartay saxixia weeraryahanka reer Brazil Everton iyagoo uga soo iibsanaya kooxda Gremio lacag gaareysa 36 milyan ginni. (The Sun)
Arsenal ayaa si weyn u dooneysa inay amaah uga qaadato Barcelona xiddigeeda Malcom laakiin kooxda heysata horyaalka La Liga ayaa dooneysa 50 milyan kaash ah oo lagu wada iibsanayo xiddigaan. (The Sun)
Tababaraha Arsenal Unai Emery ayaa rajeynaya inuu la soo wareego afar xiddig oo uu arko inay yihiin xiddigo waa weyn oo qaali ah. (Telegraph)
SIDOO KALE AKHRISO: "Xilli Ciyaareedka Soo Socda Premier League Waa Mid Aan La Saadaalin Karin Balse Waxaan Filayaa In Jurgen Klopp Uu Ku Guuleysan Doono".
Paris Saint-Germain ayaa soo diiday dalabkii Barcelona ee ahaa 40 milyan ginni oo la socdaan 31 jirka reer Croatia Ivan Rakitic iyo 27 jirka Philippe Coutinho si ay u la soo wareegaan Neymar oo 26 sanno jir ah. (L’Equipe, via Express)
Inter Milan ayaa la filayaa inay la kulanto qiimaha ay Manchester United duldhigtay weeraryahanka reer Belgium Romelu Lukaku oo 26 sanno jir ah, laakiin waa kaliya haddii United ay ogolaato 60 milyan ginni oo lagu kala bixinayo seddex sannadood ah iyo 15 milyan ginni oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedka ciyaaryahanka. (The Sun)
Xiddiga khadka dhxe ee Spain iyo Real Madrid Dani Ceballos oo 22 sanno jir ah ayaa ku dhow inuu u saxiixo kooxda Arsenal. (Mundo Deportivo)
Roma ayaan awoodin inay bixiso lacagta lagu burburin karo qandaraaska Toby Alderweireld ee Tottenham oo gaareysa 25 milyan ginni, waxaana ay u soo bandhigi doonaan xiddiga khadka dhexe ee Talyaaniga Nicolo Zaniolo oo 20 sanno jir ah inuu qeyb ka noqdo heshiiska ay kula wareegaan 30 jirka daafaca dhexe ee reer Belgium. (Daily Mirror)
Daafaca bidix ee England Danny Rose oo 29 sanno jir ah ayaan la safri doonin ciyaartoyda kooxda Spurs ee ku sii jeeda Singapore madaama ay kooxda dooneyso inay iibiso. (Telegraph)
kooxda Everton ayaa xiiseyneysa weeraryahanka Juventus Mario Mandzukic oo 33 sanno jir ah, waxaana ay sugayaan inay arkaan haddii tababare Maurizio Sarri uu ciyaaryahanka daneynayo iyo haddii kale. (Telegraph)
SIDOO KALE AKHRISO: PSG Oo Qiratay In Bixitaanka Neymar Uu Gabagabo Marayo Xilli Laga Saaray Liiska Kooxda Ee Kulankooda Ugu Horeeya Ee Horyaalka
Wakiilka goolhayaha Liverpool Simon Mignolet ayaa sheegay in goolhayaha 31 jirka ah inuu doonayo inuu ka tago Reds si uu u helo kubad joogta ah. (Les Sports Plus)
AC Milan ayaa isku dayi karta inay la saxiixato daafaca Ivory Coast ee kooxda Manchester United Eric Bailly oo 25 sanno jir ah, ka dib markii ay ka quusteen saxixia daafaca 30 jirka ah ee Liverpool Dejan Lovren. (Tuttosport)
Daafaca dhexe ee Faransiiska Eliaquim Mangala ayaa si xor ah uga tagi kara Manchester City. 28 jirkaan ayaa ahaa daafaca ugu qaalisan taariikhda Britain markii uu ku soo biirayay City oo 42 milyan ginni kula soo wareegtay sannadii 2014. (Daily Mail)
William Saliba ayaa doonaya inuu u wareego kooxda Gunners laakiin kooxdiisa Saint-Etinne ayaa jecel inay ka iibiso Tottenham oo dalab ka fiican Gunners ka gudbiay 18 jirka daafaca dhexe. (The Sun)